နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီးပွားရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (ရုပ်သံသတင်း) » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၂၁
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်စီးပွားရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား (ရုပ်သံသတင်း)
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် စီးပွားရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၃
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး(၃/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
စီးပွားရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁)ကျင်းပ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
မြန်မာ့ဂီတသုခုမအနုပညာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သောအားဖြင့် နိုင်ငံကျော် မြန်မာသံစဉ်ဂီတ အနုပညာရှင်များ၏ ဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်
အောက်တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၉ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ နယ်မြေခံ တပ်မတော်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာသင်တန်းကျောင်း များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ တည်ဆောက်နေမှုများအား သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဩဂုတ် ၂၆၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အားနိုင်ငံရေးပါတီ ၃၄ ပါတီမှ ပါတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အတွင်းရေးမှုးများလာရောက်မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
ဩဂုတ် ၁၅၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
(၃၁)ကြိမ်မြောက်သာသနာ့ဝန်ဆောင်သာမဏေကျော် စာတော်ပြန်ပွဲဖြေဆိုနေသည့် သံဃာတော်များ၊ ရှင်သာမဏေများနှင့် သာသနာ့နွယ်ဝင် သီလရှင်များအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ မိသားစုက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Christian Lechervy အားလက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ပန်ကွဲကျေးရွာအနီးရှိ ဗုဒ္ဓဥယျာဉ်တော်ပရိဝုဏ်အတွင်း တည်ထားကိုးကွယ်မည့် သတ္တသတ္တာဟမဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်ကြီး တည်ဆောက်ပူဇော်ခြင်းအတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အလှူတော်ငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲသို့ တက်ရောက် (ရုပ်သံသတင်း)
ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်တည်ထောင်မှု နှစ်(၇၀)ပြည့် စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်(ရုပ်သံသတင်း)
ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၉ Admin 0